राति किन अन्डरवेयर नलगाई सुत्ने? कारण यस्तो रहेछ!
एजेन्सी । कसैले टाउजरमा लगाएर सुत्छन् त कसैले कसैले शर्ट अनि टिशर्ट जब कसैकसैले जम्मै लुगा फुकालेर सुत्छन् ।अब प्रश्न उठ्छ राति अन्डरवेर लगाएर सुत्न कतिको नोक्सान गर्छ वा फाइदा ?खास गरेर मान्छेहरु चिसो रातिमात्रै टाउजर र गर्मी समयममा अन्डरवेयर लगाएरसुत्छन् ।विज्ञहरुले यो मान्छन् कि यदि अन्डरवेयर लगाएर सुत्यो भने धेरै समस्याको सामना गर्नु सक्नुपर्छ । विज्ञहरुले भनेका छन् विना कपडा नै सुत्न बढी फाइदाजनक छ ।विज्ञहरुले यो पनि भनेका छन् कि भित्रि अंगहरुलाई राति राहत दिनुपर्छ ।जसले गर्दा इन्फेक्सनबाट बचाउछ ।
पसिना आउने शरीरमा ब्याक्टेरिया छिर्ने मौका मिल्छ, खास गरेर ती अंग कपडाले ढाकेको हुन्छ ।न्युयोर्कमा गाइनोकलजिस्टको फिल्डमा काम गर्ने डा. अलिसाले हाल नै यो विषयमा लेखेका छन्– ‘मैले सधैं आफ्नो प्यासेन्टहरुलाई भन्ने गर्छु कि विना अन्डरवेयर नै सुत्ने गर्नुहोस् भनेर । यदि सधैं लुगा पहिरेर सुत्नु हुन्छ भने यसले पसिना सुक्दैन् जसले गर्दा ब्याक्टेरियालाई बच्ने मौका मिल्छ र झुँझलाहट, चिलाउने र स्किन इाफेक्स्नको सम्भावना बढाउँछ ।
महिलाहरुमा यो समस्या बढी हुन्छ । जुसको असर उनको पीरिअड्समा पर्छ । विज्ञका अनुसार जसले राति नांगो भएर सुत्दैन् उसले फराकिलो कट्टन पहिरेर पनि सुत्दा राम्रै हुन्छ ।
स्ट्यानफर्ड युनिभर्सिटी क्यालिफोर्नियाका डाक्टर आइजेनले भनेका छन्– ‘पुरुषले ओछ्यानमा अन्डरवेयर पहिरने वा नपहिरने केही त्यति असर पर्दैन् । उनले हालसालै गरेको एउटा अनुसन्धानमा पुरुषको प्रजनन दरमा पनि यसको बढी असर पर्दैन् भन्ने तथ्य फेला परेको थियो । तर, यो भन्दा पहिले भएको अनुसन्धानमा फरक फरक समय आएको थियो ।जसमा उनले भनेका थिए– फराकिलो वा टाइट अन्डरवेयर पहिरनले फरक पर्छ । टाइट अन्डरवेयर पहिरनाले पुरुषको सीमिने गुण बढी प्रभावित हुन्छ । मेडिकल विज्ञका अनुसार नंगो भएर सुत्नु एकदम फाइदा नै छ ।
जसले आफू र आफ्नो पार्टनरमा इन्टीमेसी बढ्छ । एक सर्वेक्षण अनुसार ब्राजिलमा खुला समाज छ तैपनि त्यहाँ १८ प्रतिशत महिला बिना अन्डरवेयर सुत्छन् यो आँकडा ब्रिटेनको तुलनामा धेरै कम हो ।यदि मेडिकल विज्ञको राय मान्ने हो भने रातमा विना कपडा नै सुत्ने बानी बनाउन फाइदाजनक छ । अण्डरवेयर लगाएर सुत्दा विभिन्न रोगसँगै क्यान्सरको खतरा समेत बढ्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ